Ezigbo Onye Nzube Nzube Na-arụ Ụlọ Ọrụ Garage China Manufacturer
Nkọwa:Ngalaba Ụlọ Ọrụ Garage,Oghere ụlọ ọrụ a na-achọ ịbanye,Mee ka Ụlọ Elu Garage Gaa na Ndozi
Home > Ngwaahịa > Na-aga n&#39;ihu n&#39;Ọnụ Ụzọ > Ogige ụlọ ọrụ na-echekwa ebe obibi > Ezigbo Onye Nzube Nzube Na-arụ Ụlọ Ọrụ Garage
Ọnụ ụzọ nke oghere ụlọ mposi bụ nke dị elu nke ike, nke siri ike na nke na-adịgide adịgide na-eguzogide ya, nke na-eji usoro ntinye akwụkwọ ntụ ntụ ike iji zụọ ọka osisi. Ụlọ ụgbọala ụgbọala na-eji ụgbọala eme ihe na-eji usoro ọrụ dị elu ma na-eji ọgba agọ hofic mee ngwa ngwa mepee ọnụ ụzọ nkwụsị ụgbọala, ọ bụghị dị ka nwayọ dị ka ebe a na-arụgharị ụgbọala. N'otu oge ahụ, mmetụta nke mmechi ngwa ngwa nwekwara ike igbochi ihe ndị ọzọ ịbanye .
A na-emeghe oghere ụzọ dị elu ma kwụchie n'okpuru ụlọ ka ịchekwa ohere. Ụkpụrụ iwu a pụtara na ị nwere ike iji ohere dị n'ime na n'ihu ụlọ mgbochi mee ihe n'ụzọ zuru ezu. Enwere ike ịkwanyere ọnụ ụzọ ụlọ mposi n'ọdụ ụgbọ mmiri ọ bụla, ma nyefee ya n'ogo 14 cm karịa ọnụ ụzọ dị elu. Ihe na-agbanwe agbanwe ma na-eguzogide ihu igwe na n'akụkụ anọ nke oghere mmepe Hörmann na-eme ka o doo anya na a na-akwa ha akara.
--Matụta: aluminom alloy, 2.0mm ọkpụrụkpụ
--Panel: ịkụcha akwụkwọ osisi n'elu, ọganihu na igbe nchekwa igbe, nkwekọrịta nchedo aka, nkwekorita panel 40mm.
--Color: porcelain na-acha ọcha (ogbe na-acha ọcha, ọka osisi a ma ama, na-egosiputa ọka ọla kọpa)
--Hardware: ebipụta akwụkwọ, ihe dịka sentimita 2.5, ụda mmiri nke 82B
Kedu ihe dị mma nke ụzọ nkwụsị ụgbọala anyị?
- Juputa na ihe puru iche nke puru igbochi oku na mkpọtụ, o nwekwara ike ikpuchi ikpo.
- Mee akwa efere abụọ dị elu
- Azụ nke ụlọ arụnyewo eriri rubber akara
--Otughari uche: ntaneti di n'ime ime, di n'ime 30 met
--Beautiful na inogide: okpukpu abụọ nke ígwè n'ime na n'èzí ọnụ ụzọ, polyurethane mkpuchi, panel ọkpụrụkpụ 35 mm-40 mm, siri ike na mkpuchi.
Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ọ bụla, biko jụọ m mma.
Asambodo anyi: OA, SGS, ISO9001
Ọnụ Ụzọ Ndozi Na-agbanwe Ntugharị na-agbaghaghachi Kpọtụrụ ugbu a
Aluminium Alloy Ngalaba nke Garage n'Ọnụ Ụzọ Kpọtụrụ ugbu a
Aluminom Alloy Ngalaba nke Garage Ọnụ Ụzọ Ụlọ Kpọtụrụ ugbu a
Aluminum Tempered PC Sheet Nkebi nke Oghere Ụlọ Kpọtụrụ ugbu a
Oghere na-akpaghị aka na Aluminom Alloy Ngalaba Garage Ọnụ Ụzọ Kpọtụrụ ugbu a
Aluminom Garage Ọnụ Ụzọ Ụlọ Kpọtụrụ ugbu a
Ụlọ Nche Ụlọ Nche na-esite n'èzí Kpọtụrụ ugbu a
Ngalaba Ụlọ Ọrụ Garage Oghere ụlọ ọrụ a na-achọ ịbanye Mee ka Ụlọ Elu Garage Gaa na Ndozi Ngalaba nke Ụlọ Ọrụ Garage Oghere Ụlọ Ọrụ Garage Ọrụ Ụlọ Ọrụ Garage Akụrụngwa Ụlọ Ọrụ Garage Ngalaba Gaa na Ụlọ Garage